२०७८ माघ ११ मंगलवार
आफ्नै दुध दुहेर विक्री गर्ने युवती !
क्रिसमस भव्य रुपमा मनाउने खर्चको जोहो गर्नका लागि एक युवतीले आफ्नै दुध बेचेपछि यो बिषयले निकै चर्चा पायो ।बेलायत की २६ वर्षीय युवतीले आफ्नो बच्चालाई चुसाउने दुध दुहेर विक्री गरिरहेकी हुन् ।
आफ्नो दुध बिक्रिबाट आफुले अहिलेसम्म ३ हजार ७ सय पाउण्ड अर्थात् झण्डै ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको उनले जनाइन् चार सन्तानकी आमा रेबेका हडसनकी कान्छी छोरी मिली डेढ वर्षकी छिन् ।
काखकी छोरीलाई पुग्ने भन्दा आफ्नो वक्षस्थलले धेरै दुध उत्पादन गरेको निधो गर्दै उनले त्यसलाई खेर फाल्नुभन्दा दुहेर बेच्ने निधो गरी सोही बमोजिम गरेकी हुन् । आफुले आफ्नो दुध किन्न चाहने जो कोहीलाई पनि दुध बेच्ने भन्दै ।
उनले बडी विल्डर देखि लिएर से क्स क्षमता बढाउन चाहने सबैलाई आफुले दुध बेच्ने उनको एक बोतल दुध साढे १२ पाउण्ड अर्थात् झण्डै १९ सय ४० रुपैयाँमा बिक्ने गरेको उनले बताइन् ।
उनले अहिलेसम्म ८ जना ग्राहकलाई दुध बेचिसकेकी हुन् । आफ्ना कतिपय ग्राहकले यौ निक प्रयोजनका लागि आफ्नो दुध खरीद गरेको उनले खुलासा गरेकी छिन् । उनको दुध पिउने पुरुषहरुले आफ्नो यौ न क्षमता बढेको अनुभव गर्ने गरेका उनले भनाई छ ।
आफुले आफ्नो दुध किन्न चाहने जो कोहीलाई पनि दुध बेच्ने भन्दै उनले बडी विल्डर देखि लिएर से क्स क्षमता बढाउन चाहने सबैलाई आफुले दुध बेच्ने जनाइन् ।
मान्छेको दुध पिउनु प्राकृतिक र सामान्य कुरा भएको भन्दै उनले आफ्नो दुधमा प्रशस्त भिटामिन रहेको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दाबी गरेकी छिन् ।
२०७७ माघ १६, शुक्रबार १३:१८ गते0Minutes 524 Views
९.	खुल्यो मलेसिया रोजगार – न्युनतम तलब समेत तोकियो ।
अर्बपति एलन मस्क मानव दिमागमा ‘चिप’ लगाउने तयारीमा !
एक छोराको श-व आयो, अर्का छोरा परदेशमै बेप’त्ता !
साउदीमा कामदार भिसामा आएर व्यत्तिगत फाइदाको लागि काम गरे लाखौं जरिवाना !
कतार कोरोना अपडेट – को’भिड संक्र-मित बिरा’मीले ७ दिनमात्र बिदा पाउने !
यी आठ प्रयोजनका लागि मात्रै खाडी र मलेसिया जान पाइने ।
मलेसियाले फेब्रुअरीमा १० हजार कामदार भित्राउदै !